ACS uye Siemens, iwo maviri akanyanya kusimbisa masheya pane Ibex 35 | Ehupfumi Zvemari
ACS neNokia, ndiwo maviri akanyanya kushambadza pane Ibex 35
Kune mairi equity emunyika ari kuita zvirinani kupfuura mamwe masheya ekupa. Aya ndiwo makambani maviri akanyorwa nezvekukosha kweACS uye Nokia Gamesa. Kusvika padanho rekuti ivo vakaumbwa panguva ino seanonyanya kusimudzira tsika yenguva uye pamusoro pevamwe vane capitalization yakasimba. Hazvishamisi kuti ivo ndivo vane iyo wakareba rwendo pakati pekudzikira kwavo kwegore negore uye mutengo wavari kutengesa parizvino. Asi zvakare ndezvekuti tarisiro yavo yakanaka kwazvo, zvichibva pamaonero evamwe vaongorori vane mukurumbira mumisika yemari.
Chero zvazvingaitika, iwo maitiro maviri anofanirwa kutariswa kuverengerwa iwo azvino mari yekudyara kutarisira kumasvondo mashoma anotevera uye pamwe kunyange makore. Kunyanya, kana munhu akafunga kuti inopfuura hafu yezvivigiro zvakanyorwa muSpanish inosarudzika index yakaratidza mashoma avo egore mumwedzi iyi. Kuenderana nekudzoreredza kusagadzikana mumisika yemari. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei uchifanira kuramba uchifarira ACS uye Nokia Gamesa kuti uite zvisinganzwisisike stock stock usati waenda kuzororo. Nekuti iwe unogona kuve nekushamisika kwakanaka nezvavanzvimbo zvakakukomberedza.
Chero zvazvingaitika, ese maNokia Gamesa uye ACS vakatungamira muhafu yekutanga yesemester iyi yakaoma yemusika wemasheya. Kusvika padanho rekuti kufamba uku kwakaitwa zviri pamutemo, ivo vari kukwira kaviri manhamba. Chimwe chinhu chiri kufarirwa nevadiki vepakati nepakati varimi vanoda kuenda pabhiza rinokunda, sezvavanotaura mune yavo yakakosha masheya emusika. Kupfuura izvozvo kubva zvino zvichienda mberi ivo vanogona kukudziridza iyo isinganzwisisike kutemwa mukuumbwa kwemitengo yavo. Iyo haifanire kutya, asi icho chinhu chakajairika uye kunyange chine hutano kurwisa nhanho nyowani mumutengo wayo.
1 ACS munzvimbo isingakundike
2 Mune portfolio yevakawanda ma broker
3 Nokia Gamesa iri kumusoro
4 Kunonoka here kuvhura nzvimbo?
5 Zvimwe zviyero zvekushandisa
6 Tarisa matanho akakodzera
ACS munzvimbo isingakundike
Ehezve, zvinoita sekunge gore rino nderaFlorentino Pérez, uye kwaakabatana nemasangano emakambani achangopfuura akapa simba rakakura kune kukosha kwekuvaka. Hapana mubvunzo kuti 2018 ndiro gore rekuti ACS ive nayo maererano nekushanduka kwemitengo yayo mumisika yemari. Panguva ino ari munzira yekupedzisira kukurira chipingaidzo chakaomarara chaaive nacho mwedzi mishoma yapfuura mu 36 euros pamugove. Zvinoita sekunge ingori nyaya yenguva isati yazadzikisa chinangwa ichi chinodikanwa nevatengesi vadiki nepakati. Kunyangwe kana iwe uchida kupinda munzvimbo dzavo zvinogona kunge zvichitononoka kuita kuti kuchengetedza kubatsire nekusimba kukuru.
Kubva pane ino maonero, imwe yemaitiro ekutora mumazuva mashoma anotevera kutora chinzvimbo muACS panguva iyoyo nyore kupfuudza anotevera nhanho iyo ine ma resistor. Kunyangwe mukana wekudzokorodza hauna kukwirira sezviripo masvondo mashoma apfuura. Uye zvese semhedzisiro yekukwira kumusoro uko kwawakagadzira mumashure ekupedzisira emusika wekutengesa. Chero zvazvingaitika, hapana mubvunzo kuti ndeimwe yehunhu hunofanirwa kunge huri muchikwama kubva ikozvino. Pamusoro pezvimwe zvakakosha zvebhuruu machipisi emari yenyika
Mune portfolio yevakawanda ma broker
Kana zviito zvavo zvichizivikanwa nechimwe chinhu panguva ino, imhaka yekuti imwe yemaonero akakurudzirwa nevamiriri vemari vakasiyana. Vaviri vemunyika uye kunze kwemiganhu yedu uye ichi chinhu chinofanirwa kupinza kuvimba kwakanyanya kana chinangwa chako chiri chekuvhura nzvimbo munzvimbo ino yemari pamusika wemasheya. Kunze kwehumwe hunyanzvi uye pamwe kunyangwe kufunga kwakakosha. Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti panguva ino ACS ndeye yakachengeteka mvumo yemusika wemasheya kupfuura vamwe vari munyika inoenderera musika. Chaizvoizvo nekuti iri mu kukwidza uye pasina kukahadzika kwese. Uye nekudaro iwe unogona kutora mukana weiyi yakasarudzika nguva kana yavo migove yakanyorwa.
Imwe yenhau dzakanyanya kukanganisa mutengo wayo kuti usvike nyika ino inyaya yekuti yakawedzera kune mamwe matunhu. Kana iri semuenzaniso wemigwagwa mikuru kuburikidza nechibvumirano chayo chazvino chekambani ku tora zvinzvimbo muAbertis. Chinhu icho pasina mubvunzo chakabatsira kukwira zvinzvimbo mumutengo wadzo mumavhiki apfuura. Nekuti pakati pezvimwe zvikonzero zvakatungamira kukutenga kuri kuiswa pachena pakutengesa. Nekupinda kutsva kwechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati.
Nokia Gamesa iri kumusoro
Nokia Gamesa hapana mubvunzo kuti ndeimwe yemasokisi anopisa pari zvino. Kunyangwe iyi mamiriro asiri chinhu chitsva, kana zvisiri izvo zvinopesana anga ave makore mushure memakore nekuwedzera kuwedzera. Chinhu chinonyatso kushamisa vamwe vevanoongorora zvemari vane mukurumbira. Nguva dzose pasi pechakanaka kwazvo uptrend mune ese mazwi uye izvo zvinokurudzira kutora zvinzvimbo kunyangwe uine mutengo wakakwira kwazvo mushure mekupedzisira kukwira kwawakaona mumasangano ekupedzisira ekutengesa.
Parizvino, Nokia Gamesa inogoverana vanotengesa pa13.80 euros. Asi nekutarisa kwake kwakaiswa pa15 euros, ndiko kupokana kwake kukuru munguva yepakati nepakati. Nokurudziro yekutenga chero bedzi isingapfuure imwe rutsigiro rwekukosha kwakakosha. Kusvika pakuti iro rehunyanzvi chimiro chinoratidza chinogutsa kwazvo mamiriro ezvavanofarira. Nesimba muzvinzvimbo zvavo izvo zvishoma zvirevo zvereferensi indekisi yemusika weSpanish wemusika une panguva ino.
Kunonoka here kuvhura nzvimbo?
Nekudaro, kune mamwewo mazano akasimba kwazvo anofungidzira kuti nhasi chanonoka kutora zvigaro paNokia Gamesa. Izvo zvikonzero zvavanotaura zvinoreva izvo haina mitengo inokwezva kwazvo vanoda kutenga zvikamu zvavo. Neimwe njodzi kuitira kuti iwe ugone kurasikirwa nemari mukuita kwako pamusika wemusika. Njodzi yekuti kuvapo kunogona kuvhundutsa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya iwo ekucheka kwakadzivirirwa zvikuru ayo anoedza kutiza kubva kuchengetedzeka nenjodzi huru mumisika yemari.
Kubva pane ino mamiriro, vamwe vevanonyanya kukosha vanoongorora mumusika wemasheya vanotenda kuti Siemens Gamesa inokosha inonakidza, asi kuti yakarangwa zvakanyanya uye panguva ino chaiyo ndiyo mamiriro ekuti vatyairi vafunge kana chiri chiitiko chaicho kufunga nezvazvo uye kuona kana isu takamirira kugadziriswa kuisa kukosha. Kusvika padanho rekuti vanosimbisa kuti iwo mukana mukuru waive pazasi pe10 euros pamugove, uko chirango chakange chatoratidzwa kuve chakanyanyisa. Tiri kuona kuti pane kupesana kwetsika mukubatana neNokia.
Zvimwe zviyero zvekushandisa
Ehezve, chimwe chezvinhu zvakashata zvakanyanya zveichi kukosha kazhinji kune chikamu chakanaka chevatengesi. Kunyanya kubvira iyo avhareji aripo muzvikamu makumi mana tichiri nayo pamusoro pemutengo weNokia Gamesa. Icho chinhu chinofungidzira chakashata chiratidzo cheiyo kukosha uye pamusoro pehumwe hwokufunga hwehunyanzvi uye pamwe kunyange hwakakosha Naizvozvo, chengetedzo ndiwo mutemo unofanirwa kutungamira mashandiro ese mumisika yemari. Nekuti ichokwadi kuti zvakare kune mari yakawanda inogona kurasika mune kumwe kufamba kwayo.
Kubva kuongororo iyi yeNokia Gamesa inofanirwa kujekeswa kuti pane nzvimbo yekutenga zvinzvimbo nekuvhara pamusoro gumi nemaviri euros vanogona kuita muviri vasina matambudziko akawandisa. Kune rimwe divi, zvichave zvakakosha kuchengetedza nzvimbo dzako dzaunogara uchiisa kurasikirwa kwekumira, nekuti hapana munhu ane chokwadi chechokwadi chekuti chinzvimbo chako chingaenda kupi mumazuva anotevera kana kunyangwe mavhiki. Muchiitiko chekuti mamiriro ezvinhu haana kutarisirwa kubva zvino zvichienda mberi. Usazvikanganwa kana iwe usiri kuda kuve nezvinetso kubva zvino zvichienda mberi.
Tarisa matanho akakodzera
Paunenge uri kune rimwe divi, haugone kurerutsa kuti zvikamu zveNokia Gamesa zviri pamatanho akakosha kwazvo ekuona. Kunyangwe zvichizodikanwa kuratidza kana pakupedzisira ivo vachikwanisa kudarika iwo matanho uye kuita kuvhara pamusoro pe15 euros pamugove. Saka kuti nenzira iyi, kutenga kunoitwa nekuchengetedzeka kukuru Izvo kusvika ikozvino.
Zvakangwara kwazvo kuti iwe ufunge kuti mutengo wekambani yakanyorwa wadarika mune pfupi nzvimbo yenguva kubva pa9 euros kusvika panosvika gumi nemana, iko iko kwakamira kwakakosha panguva ino. Nekuti ichokwadi chaizvo kuti kururamisa kwainogona kuvandudza kunogona kuva nechisimba uye uye kwete izvo zvinodiwa nemisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » ACS neNokia, ndiwo maviri akanyanya kushambadza pane Ibex 35
Akabhadharwa maaccount: anosanganisira chii?